Pyae Phyo (MMiTD): ♪ Excel လေ့လာချင်သူများအတွက် ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေ့လာနိုင်မယ့် - All in one - MEET Excel Lessons (Share ပေးပါ) ♫
♪ Excel လေ့လာချင်သူများအတွက် ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေ့လာနိုင်မယ့် - All in one - MEET Excel Lessons (Share ပေးပါ) ♫
ကျနော် ရေးသားခဲ့သမျှ သင်ခန်းစာများကို တစ်စုတစ်စည်းထဲ သိမ်းထားလို့ရပါပြီ။
Basic to Intermediate Video ၁၁ ဖိုင်နဲ့ တစ်နှစ်ကျော် ရေးသားခဲ့တဲ့ Excel Post ၁၀၀ ကျော်ကို စုစည်းပေးထားပါတယ်.။ အရေးကြုံတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါ တကူးတက ပြန်ရှာနေစရာမလိုတော့ပါဘူး..။
Excel နဲ့ပတ်သက်တာ အကုန် Cover မဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့ အကူညီပေးနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်..ခင်ဗျာ..။
ရှာရလွယ်အောင် အောက်ပါအတိုင်း အပိုင်း (၇) ပိုင်း ခွဲထားပါတယ်..။
နောက်ထပ် ရေးဖြစ်တဲ့ ပို့စ်များကိုလဲ သက်ဆိုင်ရာ အပိုင်း ထဲမှာ အမြဲ ထည့်သွင်းပေးသွားပါမယ်..။
စာအုပ်ထုတ်ဖို့ တောင်းဆိုထားကြတဲ့ ညီအကိုမောင်နှမများနဲ့ သင်တန်းတက်ဖို့ အချိန်မပေးနိုင်ကြတဲ့ ညီအကိုမောင်နှမများလည်း ဒီပို့စ်လေးနဲ့ ကျေနပ်နိုင်ကြပါစေ..။
အားလုံး Excel ကို အထိရောက်ဆုံး အသုံးချနိုင်ကြပါစေ ခင်ဗျာ..။
Last Update : 1.6.2016 (Wednesday)
▲ Basic Excel Video သင်ခန်းစာများ ▲
ဒီသင်ခန်းစာတွေက Excel ကို အခုမှ စတင် အသုံးပြုမယ့်သူတွေကို Intermediate Level အထိ ဆွဲတင်ပေးနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်..။ Video Download Link များ မကြာခင် ထပ်ထည့်ပေးသွားပါမယ်..။
လက်ရှိ Excel ကို သုံးနေသူများအတွက်လဲ အထောက်အကူ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
1. Excel အား စတင် အသုံးပြုခြင်း
2. အခြေခံ Formatting Techniques များ လေ့လာခြင်း - ၁
3. အခြေခံ Formatting Techniques များ လေ့လာခြင်း - ၂
4. Excel တွင် အခြေခံတွက်ချက်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်း
5. Relative and Absolute References အား လေ့လာခြင်း (လေ့လာဖြစ်အောင် လေ့လာသင့်ပါတယ်..)
6. Find and Replace အား ထိရောက်စွာ အသုံးပြုခြင်း
7. Paste Special တွင် ပါဝင်သည့် Function များ လေ့လာ အသုံးပြုခြင်း
8. Excel Workbook, Excel Sheet များအား Password ဖြင့် ကာကွယ်ခြင်း
9. Conditional Formatting အား စတင် အသုံးပြုခြင်း
10. Data Filtering အား ထိရောက်စွာ အသုံးပြုခြင်း
11. IF Function ကို လေ့လာခြင်း
အပိုင်း ( ၂)
▲ Excel Formulas များ လေ့လာခြင်း ▲
အသုံးများတဲ့ Excel Formula တွေကို Definition နဲ့ အတူ ဥပမာတွေနဲ့ ရှင်းပြပေးထားပါတယ်..။ ခေါင်းစဉ်ငယ်တွေ ထပ်ခွဲပေးထားပါတယ်..။
1) Logical Formulas
IF - http://goo.gl/npfBrs
IF & OR - http://goo.gl/ZfqVTW
IF & AND - http://goo.gl/Wr4tbu
IFERROR - http://goo.gl/6g1fAy
2) Date and Time Formulas
Date and Time - http://goo.gl/68mvqF
Year, Month, Day & Hour, Minute, Second - http://goo.gl/sEzTBK
Workday - http://goo.gl/YZyu7U
Workday.intl - http://goo.gl/JOnspB
Networkdays - http://goo.gl/0M4tJ5
DateDif - http://goo.gl/10IoRf
3) Text Formulas
UPPER , LOWER , PROPER - http://goo.gl/8Tp8oU
Trim & Clean - http://goo.gl/uzNJd4
Find & Search - http://goo.gl/aQaibf
Concatenate , & - http://goo.gl/ezygMg
EXACT - http://goo.gl/nReQO8
Rept - http://goo.gl/Weq0Oy
Left, Right, Mid - http://goo.gl/AkDMh7
Len - http://goo.gl/i9dAzL
4) Math Formulas
Sum, Max, Min,Count, Average - http://goo.gl/c2f5Nb
AverageA - http://goo.gl/8WQJqF
Sumif & Sumifs - http://goo.gl/mKbu9i
Averageif & Averageifs - http://goo.gl/mPC0mt
Countif & Countifs - http://goo.gl/euSNsq
RAND & RANDBETWEEN - http://goo.gl/fLA8A2
Round, Rounddown, Roundup - http://goo.gl/v85YVM
Sumproduct - http://goo.gl/7KiZNw
5) Lookup and Reference Formulas
Lookup - http://goo.gl/6tvWr2
Vlookup & Hlookup - http://goo.gl/CxxYfd
Index - http://goo.gl/gyfiDo
Match - http://goo.gl/TKrvNh
Index Match Match Vs Vlookup - http://goo.gl/oWpecp
Row, Column , Area - http://goo.gl/Ulh2Qi
Indirect - http://goo.gl/zgrS03
Hyperlink - http://goo.gl/rxeq2b
Choose - http://goo.gl/kcVagD
6) Formula Errors
Formula Error များကို နားလည်ခြင်း၊ ချဉ်းကပ်ကျော်လွှားခြင်း
Formula Error များကို ရေတွက်ခြင်း
Formula Error များကို အလွယ်တကူ ဖြေရှင်းခြင်း
အပိုင်း ( ၃)
▲ လက်တွေ့ ပြသနာများအား Excel Formula များရေးသား၍ ဖြေရှင်းခြင်း ▲
ကျနော့်ကို မေးကြတဲ့ အခက်အခဲတွေကို Case Study အနေနဲ့ ပြန်လည်ဖြေရှင်းပေးထားတာတွေရယ်၊ အခြား သိသင့်သိထိုက်တာတွေရယ် စုစည်းပေးထားပါတယ်.။ Excel မှာ အဖြေတစ်ခုရဖို့ Formula တွေ အမျိူးမျိူးနဲ့ ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်..။ ကျနော်က အများအတွက် သင့်တော်မယ့် နည်းလမ်းတွေနဲ့ ဖြေရှင်းထားတာဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ..။
၁) မြို့ အမည်တွေကိုအမျိူးမျိူးရေးသွင်းကြတော့ (ဥပမာတောင်ကြီးကိုTaung Gyi, Taungyi) စသဖြင့် အမျိုးမျိူးရေးကြတော့ SUMIF ကိုပြီး ရောင်းအားပမာဏကို ရွေးပေါင်းလို့ မရတော့ဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။ ဘယ်လို ရေးသားဖြေရှင်းရပါမလဲ ?
၂) Excel မှာ လူအမည်ရိုက်တာနဲ့ ကျား/မ အလိုအလျောက်ခွဲစေဖို့ ဘယ်လို ရေးသားရပါမလဲ ?
၃) စာသားနဲ့ ကိန်းဂဏန်းထဲရောနေတဲ့အထဲက ကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့ အခြား ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုနဲ့ မြှောက်ချင်ပါတယ်..။ ဥပမာ Qty ဆိုတဲ့ Column မှာ3Boxes, 155 Packages စသဖြင့် စာသား အရေအတွက် ကလဲ မတူ သလို ပါဝင်တဲ့ကိန်းဂဏန်းအလုံးရေလဲ မတူကြပါဘူး..။ အဲဒီ က ကိန်းဂဏန်းတွေကို သူတို့ရဲ့ ဈေးနှူန်းနဲ့ မြှောက်ချင်တာ၊ ဘယ်လို Formula ရေးရမှာပါလဲ ?
၄) Box တစ်ခုမှာ ပုလင်း ၁၂ လုံးပါပါတယ်..။ ရောင်းရတဲ့ ပုလင်းအရေ အ တွက်သိတာနဲ့ Box ဘယ်နှစ်ခုနဲ့ ပုလင်းဘယ်နှစ်လုံး ရောင်းရတယ် ဆိုတာ အဖြေတန်းထွက်ချင်ပါတယ်..။ ဘယ်လို Formula ရေးသားရပါမလဲ ?
၅) နာမည်များ စာရင်းသွင်းရာမှာ အမည်ရှေ့က အားလုံး Dr. ထည့်သွင်းရမှာကို တကယ်သွင်းတဲ့အခါကျတော့ အချို့ အမည်တွေမှာ Dr. ပါပြီး အချို့  အမည်တွေမှာ Dr. မပါဘူး ဖြစ်နေပါတယ်..။ ပါတဲ့ အမည်တွေကို ဒီအတိုင်းထားပြီး မပါတဲ့ အမည်တွေရှေ့မှာ Dr. ထည့်ချင်တာ ဘယ်လို လုပ်လို့ရနိုင်ပါသလဲ ?
၆ ) Test 1 လို့ ရိုက်ထည့်ပြီး Autofillနဲ့ ဆက်ဆွဲလိုက်ရင် Test2, Test3, Test4စသဖြင့် Series လိုက် အလိုအလျောက် ဖြည့်ပေးသွားပါတယ်.. ။ 1 Test,2Test လို့ ရိုက်ထည့် ပြီးAutofillနဲ့ ဆက်ဆွဲလိုက်ရင်လည်း အလိုအလျောက် ဖြည့်ပေး သွားပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် Test 1: လို့ ရိုက်ထည့်ပြီးAutofillနဲ့ ဆက်ဆွဲတော့ Test 1: ဆိုတာတွေပဲ Copy ပွါးသွားပါတယ်...။ Test 2: , Test 3: စသဖြင့် အလိုအလျော က်ဖြည့်စေချင်တာဘယ်လိုလုပ်ရပါသလဲ...?
၇) နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ Calendar Quarter နဲ့ Fiscal Quarter ကို ဘယ်လို ခွဲထုတ်လို့ရပါမလဲ ?
၈) Excel ကို အသုံးပြု ၍ ကံထူးရှင် ရွေးချယ်ခြင်း - ၁
၉) Excel ကို အသုံးပြု ၍ ကံထူးရှင် ရွေးချယ်ခြင်း - ၂
၁၀) Sentence Case
Excel မှာ Upper, Lower , Proper Case များ ချိန်းဖို့ပဲ ပါပါတယ်..။ Sentence Case အတွက် မပါသေးပါဘူး.။ Sentence Case ကို ပြောင်းချင်ရင် ဒီ Formula ကို သုံးနိုင်ပါတယ်..။
၁၁) သုံး Row မြောက် ကိန်းဂဏန်းများကို ရွေးချယ်ပေါင်းခြင်း
၁၂) Excel တွင် Ratio တွက်ချက်ခြင်း ( ဥပမာ 3:2 , 11:20 )
၁၃) Excel တွင် နာရီ၊ မိနစ်များကို တွက်ချက်ခြင်း
၁၄) DVD, TV, DVD and TV, TV and Fan စသဖြင့် Cell တစ်ခုမှာ အမည်တစ်ခုပါတာရှိသလို ရောပါနေတာလဲရှိပါတယ်။ TV ဘယ်နှစ်ခုပါလဲသိချင်တာ Countif နဲ့ ရေးတာ အဖြေမှားနေလို့ ဘယ်လို ရေးသားရပါမလဲ ?
၁၅) ကျနော့်မှာ ရက်စွဲတွေရှိပါတယ်။ အဲဒီ ရက်စွဲတွေရဲ့ နေ့၊ ဥပမာ Monday, Tuesday စသဖြင့် ဆွဲထုတ်ချင်ပါတယ်။ Formula ဘယ်လိုရေးရပါမလဲ ?
၁၆) Wildcard ကို အသုံးပြုပြီး Excel Formula များရဲ့ Power ကိုမြှင့်တင်ခြင်း
၁၇) " Operator Precedence in Excel Formulas "
Excel မှာ Formula တွေ ရေးသားတဲ့အခါ ကိုယ်ရေးတာ မှန်တယ်လို့ ထင်ရရဲ့သားနဲ့ အဖြေမှားနေတတ်တာဟာ Excel Operators အစီအစဉ် လွဲနေလို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်.။
၁၈) " Max IF & Min IF "
ဒေတာအများကြီးထဲမှ မိမိရှာဖွေလိုသော Item ၏ အကြီးဆုံး၊ အသေးဆုံးကိန်းကိုရှာဖွေခြင်း
၁၉ ) မေး။ Columnn B မှာ ပေ ကို ရေးထားပြီး Column C မှာ လက်မ တွေကို ရေးထားပါတယ်..။ Column C က လက်မတွေ ကို ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ ပေ ကျော်သွားတဲ့ လက်မတွေကိုပဲ Total မှာ ပေါ်ချင်ပါတယ်..။ ဥပမာ Column C က လက်မတွေ ပေါင်းလိုက်လို့ ၃၅ လက်မ ရရင် Total မှာ ၁၁ လက်မလို့ပဲ ပေါ်ချင်ပါတယ်..။ Column B က ပေတွေကို ပေါင်းတဲ့အခါ Column C ဘက်က ပေပြည့်တဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေကိုပါ ထည့်သွင်းတွက်ချက်လိုပါတယ်..။ ဘယ်လိုရေးရပါမလဲ ?
၂၀ ) " Information Function များ အသုံးပြုခြင်း "
၂၁ ) Filter စစ်ထုတ်ထားတဲ့ ဒေတာတွေကို နံပါတ် အစဉ်လိုက်တပ် ချင်ပါတယ် ..။ ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲ ? ပြီးတော့ Filter စစ်ထုတ်ထားတဲ့ ဒေတာတွေကို ရွေးပြီး ဘယ်လို ပေါင်းရပါမလဲ ?
အပိုင်း ( ၄)
▲ Useful Functions, Essential Tips and Tricks ▲
အသုံးဝင်မယ့် Function, tool တွေရယ်၊ သိကိုသိသင့်တဲ့ Tips and Tricks တွေရယ် စုစည်းပေးထားပါတယ်..။
၁) Data Validation
၂) Dependent Data Validation
၃) ထည့်သွင်းပြီးသော Data များ ထပ်မံမထည့်သွင်းစေရန် (Preventing Duplicated Entry)
၄) မိမိလိုအပ်သည့် Cell Range ကိုသာ Password ဖြင့် ကာကွယ်ခြင်း
၅) Blank Row များကို လွယ်ကူမြန်ဆန်စွာ ဖျက်ခြင်း
၆) Cell Range များ အား အမည်ပေးခြင်း နှင့် လက်တွေ့အသုံးပြုခြင်း
၇) Cell တစ်ကွက်အတွင်းတွင် Chart တစ်ခု ရေးဆွဲခြင်း (သို့မဟုတ်) Sparklines ကို အသုံးပြုခြင်း
၈) 3D Reference Formula များ ရေးသားခြင်း
၉) Histogram ကို အသုံးပြုခြင်း
( မိမိမှာရှိတဲ့ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက် များစွာထဲမှာ ကိုယ်သတ်မှတ်တဲ့ တန်ဖိုး Range တွေ အကြိမ်အရေအတွက် ဘယ်လောက်ပါလဲဆိုတာ အလွယ်တကူ တွက်ချက်ပေးနိုင်ပါတယ်။)
၁၀) Cell တစ်ကွက်အတွင်းတွင် Line Break များ ထည့်သွင်းခြင်း၊ ဖယ်ရှားခြင်း
၁၁) သတ်မှတ်ရက်ရောက်သည့်အခါ Date Alarm အနေဖြင့် ကာလာ ပေါ်စေရန်
၁၂) Column ကို အကျဉ်းအကျယ်လုပ်လိုက်တာနဲ့ စာတွေက အလိုလို သေးသွား ကြီးသွားစေရန်
၁၃) ကိုယ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ Amount ထက် ကျော်တဲ့ ဂဏန်းတွေကို အလိုလို Color ထည့်သွင်းစေခြင်း
၁၄) What – if – Analysis မှ Scenario Manager အား အသုံးပြုခြင်း
၁၅) Workbook တစ်ခုအတွင်းမှ Sheet အားလုံးအား တစ်ပြိုင်တည်း Edit လုပ်ခြင်း၊ Format ချခြင်း
၁၆) Seh လို့ရိုက်ထည့်ရင် She အဖြစ် ပြောင်းသွားပါတယ်..။ အဲလို မပြောင်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရပါသလဲ ? ( Turning off the Auto-correct in Excel )
၁၇) Sheet တစ်ခုမှ Page Setting များအား အခြား Sheet များသို့ လွယ်ကူစွာ ပွါးခြင်း ( Duplicating Page Setup )
၁၈) Excel တွင် Enter ခေါက်သည့်အခါ အောက်က Cell အကွက်ကို မရောက်ပဲ ညာဘက် Cell သို့ ရောက်စေရန်
၁၉) Excel Table တွင် Total Row ထည့်သွင်းခြင်း
၂၀) Cell တစ်ခုအတွင်းထဲမှာ Bullet ထည့်ရန်
၂၁) UNIT Conversion in Excel
၂၂) Clipboard ( Copy ယူထားသည့် ဒေတာများ ထားရှိသည့် temporary storage ) အား ထိရောက်စွာ အသုံးပြုခြင်း
၂၃) Format Painter
၂၄) ဖွင့်ထားသည့် Excel ဖိုင်အားလုံး တစ်ပြိုင်တည်း မြင်ရစေရန်
၂၅) Custom List in Excel
၂၇) Advanced Filter ကို အသုံးပြုပြီး Unique Record အား ဆွဲထုတ်ခြင်း
၂၈) Zawgyi Myanmar Font နှင့် ကိန်းဂဏန်းများကို Comma ထည့်သွင်းစေရန်
၂၉) Excel တွင် Superscript , Subscript ရေးသားခြင်း
၃၀) မိမိ ဒေတာ အချက်အလက်များကို Excel မှ အသံထွက်ဖတ်စေဖို့ (Speak out the Data) ( မြန်မာဘာသာကို Speak out လုပ်ဖို့ မပါသေးပါဘူး..။)
၃၁) " Cell တစ်ကွက်ချင်းစီရှိ ဒေတာများအား Cell တစ်ကွက်ထဲတွင် ချိတ်ဆက်ဖော်ပြခြင်း "
၃၂) Excel Camera အား အသုံးပြုခြင်း
၃၃) ကိန်းဂဏန်းတွေကို Million အနေနဲ့ မြင်ရဖို့
၃၄) Custom Number Format အား လေ့လာခြင်း
၃၅) Excel Table ကို Gmail ထဲ တွင် Table အဖြစ် ထည့်သွင်း ပို့နည်း
၃၆) Sheet 1 မှာ ရှိတဲ့ စာမျက်နှာတွေကို ပရင့်ထုတ်ပြီး Sheet 2, Sheet3က စာမျက်နှာတွေ ပရင့်ဆက်ထုတ်တဲ့အခါ Page Number အစဉ်လိုက် ဖြစ်စေရန်
၃၇ ) Microsoft Word တွင် Dropdown List များ ထည့်သွင်းခြင်းနှင့် DatePicker (Popup Calendar) ထည့်သွင်းခြင်း
အပိုင်း ( ၅)
▲ ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်စေချင်သည့် ပို့စ်များ ▲
အားလုံးအတွက် အသုံးဝင်မယ်ဆိုတာ ယုံကြည်လို့ ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်စေချင်ပါတယ်..။
၁) Save မလုပ်မိသော ဖိုင်များကို ပြန်လည်ဆယ်ယူခြင်း
၂) Corrupted Excel File မှ ဒေတာများအား ဆယ်ယူခြင်း
၃) Excel to PDF ( သို့မဟုတ်) PDF to Excel အလွယ်တကူပြောင်းလဲခြင်း
၄) Word တွင် Excel ကဲ့သို့ တွက်ချက်မှူ များ ပြုလုပ်ခြင်း
၅) Meet Number to Word Add in
၆) Pivot Table အား စတင် အသုံးပြုခြင်း
အပိုင်း ( ၆)
▲ Chart and Graph ▲
1. Chart and Graph အမျိူးအစားများနှင့် အသုံးဝင်ပုံများ
2. Chart with3Axis (3 D Charts)
Project တစ်ခု၊ လုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ အရှူံးအမြတ်၊ အတက်အကျကို ထိထိရောက်ရောက်နဲ့ ဖော်ပြနိုင်ဖို့ Waterfall Chart ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
4. Left to Right Axis
5. Combination two axis (Different Scale & Different Chart Style)
တန်ဖိုး အရမ်းကွာတဲ့ Data နှစ်ခုကို Chart တစ်ခုတည်းမှာ ဖော်ပြချင်တဲ့အခါ ဒီနည်းကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
6. Logarithm Axis Scale
ကိုယ့်ရဲ့ ဒေတာတွေက တန်ဖိုးအကြီးအသေးအရမ်းကြီးကွာဟနေရင် တန်ဖိုး နိမ့်တာတွေကို Chart မှာ မြင်တွေ့ ရဖို့ ခက်ပါတယ်။ အဲဒီအခက်အခက်ကို Logarithm Scale အသုံးပြုပြီး ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။
7. Customizing Column Chart
8. Chats with Sub-Categories
အပိုင်း ( ၇)
▲ အခြား သိသည့်သည့် ပို့စ်များ ▲
လေ့လာသင့်သည့် Excel Website များ
ဖုန်းတွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် Excel App များ
အမေးများဆုံး မေးခွန်းများ (FAQs)
ယခုတင်ပေးထားသော သင်ခန်းစာများကို အချိန်ရ ရသလို M.E.E.Tရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ကို ရယူပြီး PDFလုပ်၍ နောက်ထပ်တစ်ဖန် ပြန်လည်တင်ပေးပါမည်။
Credit to https://m.facebook.com/myanmarexcel/